Thailand, Germany, Canada ikozvino iri kugovera itsva Yekushanya Gamba: Jens Thraenhart, anozivikanwa saVaMekong
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Awards » Thailand, Germany, Canada ikozvino iri kugovera itsva Yekushanya Gamba: Jens Thraenhart, anozivikanwa saVaMekong
Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Thailand Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
World Tourism Network ndiko kuwedzerwa kwekuvaka zvakare. Hurukuro dzekufamba mukupindura denda re COVID. Chirongwa cheHeroes chinoona vanhu vanoratidza kushinga mukati mechikamu. Gamba rekutanga rekushanya kubva kuThailand nderekune imwe nyika, VaJens Thraenhart.
Thailand ine gamba rayo rekutanga rekushanya rakapihwa ne World Tourism Network.
Jens Thraenhart akabvuma kusarudzwa kwake kuti apinde mu Horo yeInternational Tourism Magamba
Jens Thraenhart mugari weGerman -Canada anogara muHumambo hweThailand.
Iye anozivikanwa zvakare saVaMekong. Jens Thraenhart ndiye wekutanga Wekushanya Gamba muThailand.
Ane makore anopfuura makumi maviri nemashanu ekufamba kwenyika, kushanya, uye ruzivo rwekugamuchira vaeni, nzvimbo dzekuita mukushambadzira, kushambadzira, kusimudzira bhizinesi, manejimendi manejimendi, kuronga kwehunyanzvi, uye e-bhizinesi. Pakutanga kwebasa rake rekushambadzira kwaJens kwakasimbiswa pamwe naye kuvamba nekushandisa kambani yakabudirira yekupa chikafu, achitanga kambani yeNew York-yeInternet yekuzorora yekufambisa kambani yeInternet nekugadzirisa yakazvimiririra yakasarudzika gorofu nzvimbo kuGerman.
Muna 2014, Jens Thraenhart akagadzwa nemasangano ekushanya kuThailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, neChina (Yunnan neGuanxi) kutungamira Mekong Tourism Coordinating (MTCO) seMutungamiriri wayo. mu2008, akabatana-akunda mubairo-anokunda China dhijitari kushambadzira yakasimba Dhiraini Trail muna2009, uye akatungamira kushambadzira neInternet nzira zvikwata neCanada Tourism Commission neFairmont Hotels & Resorts. Kubva 1999, iye ari CEO weChameleon Strategies.
Akadzidziswa kuCornell University aine MBA-yakagamuchirwa Masters eManagement muKugamuchira Vaeni, uye mubatanidzwa Bachelor yeSainzi kubva kuYunivhesiti yeMassachusetts, Amherst, uye University Center 'Cesar Ritz' kuBrig, Switzerland, VaTraenhart vakazivikanwa seimwe iyo indasitiri yekufambisa yakakwira nyeredzi zana neTravel Agent Magazine muna 100, yakanyorwa seimwe yeHSMAI yemakumi maviri neshanu Anoshamisa Zvokutengesa uye Kushambadzira Pfungwa Mukugamuchira Vaeni uye Kufamba muna 2003 na25, uye yakatumidzwa seimwe yeTop 2004 Dzinoshamisa Dzakanaka muEuropean Travel uye Kugamuchira vaenzi muna 2005. Ndiye UNWTO Affiliate Member, PATA Board Member, uye akapfuura Sachigaro wePATA China.
Akasarudzwa segamba rekushanya naPeter Richards weTourlink Project muThailand.
Mr. Richard akaruramisa kusarudzwa kwake achiti:
Ini ndaziva uye ndashanda pane akasiyana mapurojekiti neJens on uye off kweanopfuura makore gumi. Ane chinoshamisa chinzvimbo chekubatana nevanhu vanobva kumatunhu ese uye nemabasa, uye kuita 'kubatanidzwa' mune chimwe chinhu chinoshanda uye chinooneka.
Iye akasununguka uye akatendeka achishanda nevakuru vakuru vehurumende, shasha dzemabhizimusi uye NGOs yepasi; uye neimwe nzira inokwanisa kutsvaga nzira chaiyo yekufambisa mutsetse wekutaurirana uye kunzwisisana pakati pemapoka evanobata, kupfuura nzvimbo dzevatori vechikamu 'dzakaomarara' nzvimbo dzekushora (uye dzimwe nguva kupokana kwenhoroondo).
Mukuita kwake kuMTCO, Jens agara achibudirira kutsigira kutaridzika kwakatendeseka uye zvirongwa zvekushanya zvakaomarara, zvichiunza kuoneka uye mabhenefiti kumaSME nenharaunda, uye nekumiririra zvirongwa zvekufambira mberi mumatanho epamusoro eruzhinji neakazvimirira.
Kugadzikana kwaJen uye hunyanzvi hwekudyidzana pakati pemapoka evatori vechikamu kwakanyanya kunetsa kuwana; uye zvakanyanya kunetsa kuwana nekuvimbika, uye zvabuda zvekongiri.
Munguva yake seMutungamiriri weMekong Tourism Coordinating Office, Jens akaramba achiendesa mazano ekugadzira, uye akasvika pakuisa pamwe nekubatana. Haana kuora moyo kana vanhu vakabatikana zvikuru kuti vatore chikamu uye anogara achikuzivisa iwe kuti panogara paine imwe nguva nemukana. Iye murume chaiye kurudziro, uye anoita kuti kuomesa kwakanyanya kuite senge kusinganetsi. Anokodzera kuzivikanwa.
Pakave pasina kumanikidzira kuseri kwesarudzo iyi. Ndezvechokwadi, kubva mukuremekedza kwangu kwenyanzvi mutungamiri mukudyidzana shanduko yakanaka mukushanya. ”
Sachigaro weWTN Juergen Steinmetz akagara pasi naJens paZoom.
Iko hakuna kumbobvira kune chero mubhadharo, uye chero munhu anogona kusarudzwa pa www.mapfumo.travel
Svondo 26, 2021 pa 07: 00
Kana idzi nzvimbo nenzvimbo zvikagovaniswa nevashanyi, chiitiko ichi chinova icho chinozivikanwa seyetsika nhaka yekushanya. Kubudirira nekusimudzira mune izvi. Panguva imwecheteyo, vafambi vazhinji, kubva kumabomomers kusvika kumamireniyoni vari kutsvaga zvitsva, vachisiya rondedzero yechinyakare yenzvimbo dzekuwana dzakasiyana.